Olo Kpatcha wuxuu u magacaabay kuxigeenka guud ee YoroGang - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Olo Kpatcha wuxuu u magacaabay ku xigeenka agaasimaha guud ee YoroGang
Olo Kpatcha wuxuu u magacaabay kuxigeenka guud ee YoroGang
Waxay astaan ​​u tahay nafta Daishikan. Isagu waa qofka maamula inta ugu badan Houon Angel Didier alias Arafat Dj. Taasi waa, inuu ahaado saaxiibkiisii ​​ugu daacadda badnaa. Djupro Didier (oo caan ku ah magaca beenta ah ee Olo Kpatcha) ayaa loo magacaabay dhammaan xubnaha YoroGang, Kuxigeenka Maareeyaha Guud ee qaab dhismeedka YoroGang.
Waa kuma qofka yaqaan Carafaadka ugu caansan Carafat Dj? Xaqiiqdi, qofna. Wuxuu ogyahay fikirka iyo qorshayaasha Daishikan. Olo Kpatcha ayaa noo ah doorashada ugu fiican shaqadan. Wuxuu ku taageeri doonaa Landry Agban hawshiisa », ayaa yidhi xubnaha YoroGang.
Sidoo kale akhri: Landry Agban ayaa loo doortay Agaasimaha Guud ee YoroGang
Taasi, ka hor intaadan caddeynin inuu qoys yahay, YoroGang wuxuu ku taageeri doonaa Landry Agban iyo Olo Kpatcha howshooda si ay u sii wataan shaqada Arafat Dj. Sii wadida, Olo Kpatcha wuxuu balan qaaday inuu ilaalin doono badeecada Daishikan: Cidina kuma ciyaari doonto hantida Houon Ange Didier. Qof kasta oo raba inuu u ciyaaro ugu caqliga badan jidkiisa ayuu iga heli doonaa. "
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/people/actu/olo-kpatcha-designe-directeur-general-adjoint-de-la-yorogang
Xaaladda Neymar ee PSG: Didier Drogba ayaa dharbaaxay xiddiga reer Brazil
Gabon: soo laabashada Marie-Madeleine Mborantsuo dib ayaa loo dhigay - JeuneAfrique.com